प्रजु पन्त - | Nagarik News - Nepal Republic Media
प्रजु पन्तका लेखहरु :
प्रहरीले लखेट्दा प्रधानपञ्चको घर पुगेपछि...
झोलाभरि पर्चा, मनभरि बहुदलीय प्रजातन्त्र आउनुपर्छ भन्ने दृढ अठोट । राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्धित गरेको कठोर पञ्चायती शासन व्यवस्था भए पनि रोकिएनन् उनका पाइला अनि रोकिएनन् मनभित्रका सपना ।
प्रजु पन्त २४ चैत्र २०७६ सोमबार २३ मिनेट पाठ
बुबाले मैदान छाडे पनि मैदान नछाडेकी पुष्पा
भारतको गोरखपुरको निर्वासित बसाइ । उनका बुबा कलकत्ता गोरखपुर आउजाउ गरिरहने । त्यसै बखत सन् १९७५ मा भारतमा जुली सिनेमा रिलिज भयो । किशोरीको प्रेममा आधारित फिल्मले भारतभरि तहल्का मच्यायो । कक्षा ९ मा पढ्ने पुष्पा भुसालको कक्षामा पनि यो सिनेमा बारे कुरा हुने नै भयो ।
प्रजु पन्त ४ चैत्र २०७६ मंगलबार १४ मिनेट पाठ
पितृसत्ताले नखुलाएको साँचो
संघीयतामा गएसँगै मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय तहको एकाध स्थानलाई छाडेर स्थानीय सरकार प्रमुख हेर्ने हो भने महिला नगण्य छन् । सातै प्रदेशका सरकार प्रमुख पनि पुरुषै छन् । राष्ट्रप्रमुख महिला भए पनि सरकारको कार्यकारीमा पुरुष नै विराजमान छन् । संविधान जारी भएपछि बनेको संघीय सरकारमा ११ प्रतिशत मात्र महिला मन्त्री छन् । जबकि संविधानमै ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रजु पन्त ३० फाल्गुन २०७६ शुक्रबार ६ मिनेट पाठ
पुस्तक पढेर सरकारको विरोध
प्रायः आन्दोलन भइरहने राजधानीको माइतीघरमा सोमबार फरक शैलीको विरोध प्रदर्शन आयोजना भएको थियो। विरोध प्रदर्शनीमा सहभागी करिब तीन दर्जन प्रदर्शनकारीहरू विभिन्न विषयका पुस्तकहरू पढिरहेका देखिन्थे।
प्रजु पन्त २९ माघ २०७६ बुधबार ५ मिनेट पाठ
क्याफेले फेरेको दैनिकी
बानेश्वर चोकदेखि पश्चिमपट्टि केही मिटरको दूरीमा रहेको माइती क्याफे । पुस आठ गते बिहान ११ बजे जाँदा पुनम थापाले नमस्कार भन्दै स्वागत गरिन् । काठैकाठले बनेको कुर्सी र टेबल नजिकै गमलामा फूलेको फूलले क्याफेको रौनक त बढाएकै थियो नै पृष्ठभूमिमा बजेको आध्यात्मिक संगीतले वातावरण शान्त बनाएको थियो ।
प्रजु पन्त २२ माघ २०७६ बुधबार ९ मिनेट पाठ
पाठकको रोजाइमा उपन्यास
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना भइरहेको पुस्तक प्रदर्शनीमा नेपाली तथा विदेशी लेखकहरूद्वारा लिखित उपन्यासहरू बिक्री भइरहेका छन्।
प्रजु पन्त १४ माघ २०७६ मंगलबार ३ मिनेट पाठ
‘म आफैं कास्टिङ काउचमा परें’
अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवाले आफू कुनै समय ‘कास्टिङ काउच’ मा परेको खुलासा गरेकी छिन्। पत्रकार डिबी खड्काद्वारा लिखित रंग क्षेत्रबारेको पुस्तक ‘नियत’ विमोचन कार्यक्रममा उनले सो घटनापछि आफूले कहाँ जाने, कहाँ नजाने भन्ने सिकेको खुलाइन्।
प्रजु पन्त २९ पुस २०७६ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
२९ वर्षमा पिएचडी, ३६ वर्ष प्राध्यापन
बिहान उठेर कोर्षको किताब पढ्थिन् । दिउँसो पढ्नका लागि स्कुल क्याम्पस जान्थिन् ।
प्रजु पन्त ११ पुस २०७६ शुक्रबार १९ मिनेट पाठ
राजालाई गीत फुराउने बन्दीपुरे गाउँ
यो गीत राजा महेन्द्रद्वारा रचिएको थियो । प्रकृति, राष्ट्रप्रेम र प्रेमिल शब्दमा गीत लेख्न रुचाउँथे रे महेन्द्रले । जसै उनी बन्दीपुर पुगे फुरिहाल्यो रे गीत । मोटरबाटो नपुगेको गाउँमा घोडा चढेर, बोकिएर अथवा हिँड्नुको विकल्प थिएन । समुद्री सतहदेखि एक हजार ३० मिटरको उचाइमा रहेको बन्दीपुर । काठमाडौंबाट १ सय ४७ किमी पर छ गाडीमा जाँदा । राजा महेन्द्र त्यहाँ पुग्दा गाडीको सुविधा थिएन । डुम्रेबाट आठ किमी सडक बनेको त भर्खरै एक दशक त नागेको छ ।
प्रजु पन्त १९ मंसिर २०७६ बिहीबार २४ मिनेट पाठ
जसले जापानमा मिनी नेपाल बनाउँदै छन्
पढ्न । काम गर्न । व्यवसाय गर्न । यो जवाफको तेस्रो शब्द सुनेपछि भने हामीलाई ‘के नेपालीले आफ्नै लगानीमा त्यो पनि विकसित मुलुकमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् र ? भन्ने लाग्छ । ‘सक्छन्,’ भन्ने जवाफ आएपछि हामी घोत्लिन थाल्छौँ । विदेशी भूमिमा व्यवसाय गरिरहेका एनआरएन जीवा लामिछाने, शेष घले वा उपेन्द्र महतो लगायतका केही व्यक्तिका नाम झ्वाट्ट हाम्रो मस्तिष्कमा आउँछ ।
प्रजु पन्त ११ मंसिर २०७६ बुधबार १८ मिनेट पाठ
पुस्तकले घेरिएर हुर्किदा
अनेरास्ववियुले प्रजातान्त्रिक निकट विद्यार्थी समूहलाई गोबर भन्थे । कारण ? बुद्धि नभएकाले अनि अनेरास्ववियुले प्रजातान्त्रिकलाई खरानी भन्थे । कारण ? बुद्धि नभएकोलाई फू गरेर उडाईदिने । यो भनाइ भारतबाट आएको थियो । नेपालको विद्यार्थीले पनि एकअर्कालाइ त्यही आरोप लगाउँथेँ ।
प्रजु पन्त २६ भाद्र २०७६ बिहीबार १९ मिनेट पाठ
जो प्रधानमन्त्री पुत्रीका रुपमा चिनिन चाहन्नन्
यसपछिका १० वर्ष उनले बुबाको मुखसमेत हेर्न पाइनन्। बुबा जेल परेपछि, बुबाकहाँ जाने भनेर मीना रोइछन्। एक पटक उनकी आमाले बुबाका लागि खाना पु-याउन जेल जाँदा सँगै लिएर गएकी थिइन्। त्यहाँका कर्मचारीले कसैगरी उनलाई भेटन दिएनन्।
प्रजु पन्त १७ श्रावण २०७६ शुक्रबार २७ मिनेट पाठ
बालखैमा पाँच जिल्लाकाे घुमाई
पेसाले डाक्टर हुन् सरोज धिताल। काठमाडौं मोडल हस्पिटलमा कार्यरत उनी सर्जरीका प्राध्यापक पनि हुन्। समसामयिक विषयमा लेख्न, पढ्न र बहस गर्नमा रुचि राख्छन्। उनको रोजाइमा सामाजिक, राजनीतिक दार्शनिक पुस्तकहरु पर्छन्।
प्रजु पन्त १० श्रावण २०७६ शुक्रबार ६ मिनेट पाठ
कलेजले भर्ना लिन नमानेपछि...
प्राध्यापक हरि शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका बहुचर्चित व्यक्तित्व हुन्।
प्रजु पन्त ९ असार २०७६ सोमबार १८ मिनेट पाठ
जो कारागार रुँगेर बसे
घडीले रातको ठीक १२ बजाएपछि सुन्दरीजल कारागारमा उनी मैनबत्ती बालिदिन्छन्। यो दिन उनका लागि ठूलो विजयको दिन थियो। उनले ठूलो संघर्ष गरेर सुन्दरीजल कारागारलाई एउटा चर्चित ठाउँका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएका थिए।
प्रजु पन्त ९ असार २०७६ सोमबार १० मिनेट पाठ
प्रजु पन्तका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्